Nohavaozina taminy 03 / 11 / 2012: Fanitsiana ny maotera setroka izay nampiseho fa tsy mitsangana horizontally. Ity ny Alphasim B-52 Bombardier nosoloina FSX SP2 /P3D dia ahitana roa modely B-52G sy B-52H ary sehatra enina, ary misy rakibolana 3D (VC) sy 2D tsara indrindra ho an'ny B-52. Tsindrio Ctrl + W mba hanokatra ny banga sy ny Shift + E ho an'ny fanodikodinam-panampiana (jereo ny boky amin'ny antsipiriany bebe kokoa). Izy io dia milina lehibe ary ilainao ny felatanana mba hisintonana, indrindra raha toa ianao ka voampanga tanteraka amin'ny kerosene. Mampiditra animations su toy ny kolejy miaraka, mifoka rivotra, elatra elatra.
Ny Boeing B-52 Stratofortress dia mpandrafitra stratejika lavitr'ezaka, subsonika ary mandeha amin'ny jet. Ny B-52 dia noforonin'i Boeing, izay nanohy nanome fanohanana sy fanavaozana. Izy io dia niasan'ny tafika amerikana (USAF) nanomboka ny taona 1950. Mitondra fitaovam-piadiana hatramin'ny 70,000 kg ny baomba.
Manomboka amin'ny fifanarahana mahomby dia asao tamin'ny Jona 1946, ny B-52 famolavolana nivoatra avy amin'ny mahitsy-elatra fiaramanidina Powered by enina turboprop milina ny farany YB-nitranga fahiny 52 valo turbojet milina sy namafa elatra. Ny B-52 nitondra ny zazavavy nandositra tamin'ny Aprily 1952. Naorina mba hitondra fitaovam-piadiana nokleary ho an'ny Ady Mangatsiaka-vanim-potoana deterrence misiona, ny B-52 Stratofortress nisolo ny Convair B-36. Na dia ny ela nihetezana ny ady maro, dia latsaka ny Stratofortress mahazatra ihany munitions amin'ny ady. Ny Stratofortress anarany loatra ofisialy ampiasaina ivelan'ny toe-javatra; efa noresahin'i ny Air Force mpiasa toy ny Buff (Big Ugly Fat / manidina Fucker / Fellow).
Ny B-52 dia niasa am-pahavitrihana niaraka tamin'ny USAF hatramin'ny 1955. Ny baomba dia nanidina teo ambanin'ny Strategic Air Command (SAC) mandra-pahatongan'ny fananganana azy tamin'ny 1992 ary niditra tao amin'ny Air Combat Command (ACC) ny fiaramanidina; tamin'ny 2010 ny B-52 Stratofortresses rehetra dia nafindra tao amin'ny ACC nankany amin'ny Air Force Global Strike Command (AFGSC) vaovao. Ny fahombiazana ambony noho ny hafainganam-pandeha avo lenta sy ny vidin'ny fandidiana somary ambany dia mitazona ny B-52 amin'ny asa fanompoana na eo aza ny sidina manaraka, ao anatin'izany ny Mach 3 North American XB-70 Valkyrie, ny geometrika miovaova Rockwell B-1B Lancer, ary ny Northrop Grumman B-2 Fanahy miafina. Ny B-52 dia nanamarika ny faha-50 taonan'ny serivisy mitohy miaraka amin'ny mpandraharaha voalohany tamin'ny taona 2005 ary taorian'ny fanavaozana teo anelanelan'ny 2013 sy 2015 dia hanomboka amin'ny taona 2040. (Wikipedia)
Downloads 28 878
Nohavaozina taminy 03-11-2012